विश्वकै उत्कृष्ट बस्न लायक शहरमा कोरियाको राजधानी सउल पनि, हेरौं कति औं स्थानमा पर्यो? – Eps Sathi
विश्वकै उत्कृष्ट बस्न लायक शहरमा कोरियाको राजधानी सउल पनि, हेरौं कति औं स्थानमा पर्यो?
July 15, 2021 913
युकेको लाईफस्टाइल म्यागजिन मोनोकलले हरेक बर्ष निकाल्ने विश्वका उत्कृष्ट बस्न लायक शहरहरुको सूचिमा यस बर्ष दक्षिण कोरियाको राजधानी सउल पनि पर्न सफल भएको छ। उक्त सूचिमा राजधानी सउल ११ ‍औं स्थानमा रहेको छ। म्यागजिनले सन २००९ देखि नै हरेक बर्ष विश्वका उत्कृष्ट बस्न लायक शहरहरुको सूचि प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ।
दक्षिण कोरियाको राजधानी सउल पहिलो पटक लाईफस्टाइल म्यागजिन मोनोकलको यस्तो सूचिमा टप २० मा प्रवेश गर्न सफल भएको हो। म्यागजिनको जुलाई-अगष्ट इ स्युमा यस्तो लिष्ट प्रकाशित भएको छ। म्यागजिनले विश्वभरीका शहरहरुको अध्यन गरि यस्तो सूचि तयार पार्दछ। को’रो’ना म’हा’मा रीका बिच पनि सउलको उ’च्च स्तरको जीवनशैली, उ’त्कृष्ट यातायात सन्जा’ल, विभिन्न किसिमका आधुनिक सुविधाजस्ता कुराहरुले गर्दा सउल टप २० मा पर्न सफल भएको बताइएको छ।
मोनोकलको यो सूचिको पहिलो स्थानमा डेनमार्कको कोपनहेगन पर्न सफल भएको छ भने दोश्रो स्थानमा स्विजरल्याण्डको जुरिक रहेको छ। फिनल्याण्डको हेलसिन्की तश्रो स्थानमा छ भने स्विडेनको स्टोकहोल्म चौथो स्थानमा छ। विश्वको उत्कृष्ट बस्न लायक शहरहरुको सूचिमा जापानको टोकियो पाँचौ स्थानमा पर्न सफल भएको छ। अष्ट्रियाको भियना छैठौं स्थानमा रहँदा पोर्चुगलको लिसवोन सातौं स्थानमा छ। न्युजिल्याण्डको अकल्याण्ड आठौं, ताइवानको ताइपेइ नवौं तथा अष्ट्रेलियाको सिड्नी दशौं स्थानमा रहेका छन।
यो पनि पढौं कोरियामा बढ्यो तलब, अब महिनाको कति हुन्छ? बुझौं
दक्षिण कोरियामा काम गर्नेहरुको तलब बढेको छ। सोमबार बसेको ज्याला नि’र्धारण समितीको बैठकले न्यूनतम तलब प्रतिघण्टा ९ हजार १ सय ६० वन पुर्याएको छ। यो रकम गत बर्षको भन्दा ५ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको हो। अब कोरियामा काम गर्नेहरुले प्रतिघण्टा न्यूनतम करिब ८ डलर आम्दानी गर्नेछन।
न्यूनतम ज्याला निर्धारण समिती जसमा ९ जना सदस्यहरु रहने गर्दछन। यस समितीमा म’जदूरका पक्षबाट, ब्यवसायीहरुको तर्फबाट र सर्वसाधारण बाट प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ। सोमबार सरकारी कम्प्लेक्स सेजोङमा भएको लामो मिटिङले म’ध्यरा’तमा ज्या’ला बढाउने निर्णय गरेको थियो।
यसरी म’जदूरका प्रतिनिधी र ब्यवसायीका प्रतिनिधीहरु विच वि’वाद भएपछि ज्याला निर्धारण हुन सक्ने स्थि’ती नबनेकाले सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले मध्यमार्गी बाटो सुझाएका थिए। उनिहरुले नै प्रतिघण्टा ४ सय ४० वन बृ’ध्दि गर्न प्रश्ताव गरेका थिए। उनिहरुको प्र’श्तावमा दुबै पक्षको स’हमति भएपछि न्यूनतम ज्याला निर्धारण भएको थियो।
प्रतिघण्टा ४ सय ४० वनको बृध्दि भनेको ५.०४६ प्रतिशतको बृ’ध्दि हो। तर न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितीले औपचारिक प्रयोगका लागि ५.१ प्रतिशतको बृ’ध्दि मानेको छ। यो आयोगले को’रो’नाबाट कोरियाली अर्थतन्त्र सु’धारको बाटोमा लागेको ठानेको छ। कोरियाको केन्द्रिय बैंक बैंक अफ कोरियाले पनि यो बर्ष ४ प्रतिशतको आर्थिक बृध्दि हुने अ’नुमान गरेको छ। त्यसैगरी अप्रिलदेखि लगातार २ महिनामा ६ लाख रोजगारी थपिएको तथ्याङ्कहरुले देखाएको छ।
का’नू नी रुपमा न्युन’तम ज्याला नि’र्धारण समितीले बढेको ज्या’ला कोरियाको श्र’म मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दछ र श्रम मन्त्रालयल अगष्ट ५ मा ज्या’ला घोष’णा गर्नेछ। नयाँ ज्याला जनवरी १ तारिखबाट लागू हुनेछ। राष्ट्रपति मुन जे इनको कार्यकालमा सन २०१८ मा १६.४ प्रतिशत, सन २०१९ मा १०.९ प्रतिशत, सन २०१९ मा २.९ प्रतिशत तथा सन २०२० मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम १.५ प्रतिशत तलब बृ’ध्दि भएको थियो। (योनहाप)
Prevकोरियामा तातो हावाको प्र’कोप आउँदै, कहिले आउँदैछ? जानिराखौं।
Next‘म विदेशी हो, जे पनि गर्न सक्छु’ भन्दै एक विदेशीले कोरियनको अनुहारमा यसरी थु’के
नागरिक स्टक डिलरले पायो सञ्चालन अनुमति, ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बाँढ्ने
ज्योती लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओ यसरी हेरौं